Izinto eziluncedo kwiitafile zemabhile
Ngakumbi nangakumbi abantu bakhetha ukusebenzisa imiphezulu yeetafile zemabhile ngenxa yokubonakala kwayo okuhle kunye neempawu ezintle.
Okokuqala, ubulukhuni obuphezulu, akukho lula ukuba deformation.Marble yendalo kukudlula iminyaka emininzi ukuba yenze ngokwendalo, ke ngoku iyafana ngokufanayo kubume bayo. Kwaye ulungelelwaniso lomgama oluncinci lincinci kakhulu, phantse akukho xinzelelo lwangaphakathi. Ke ubunzima bayo buphezulu kakhulu, ekusebenziseni inkqubo ayizukukhubazeka.
Okwesibini, ukumelana nokubola kunye neasidi. I-marble yendalo ngokwendlela eyakhiwe ngayo, ngoko ke akukho lula ukubandezeleka kukhukuliseko lwesiseko se-asidi Xa ukusetyenziswa kungafuneki kuxhomekeke kwismear ukuphucula isini esigudileyo, ukugcina ukunyuka kulula kwaye kufanelekile.
Okwesithathu, ukumelana nokunxiba okuphezulu kunye nokumelana nobushushu obuphezulu. Kuba ubulukhuni bezinto zemarble buphezulu, kwaye ukuqina kuhle kakhulu, ke ukuxhathisa kwayo ukunxiba kukomelele. Ayisiyiyo loo nto, ukumelana nokushisa okuphezulu kulungile kakhulu. Ayizukutshintsha kobushushu kunye nokusilela. Kumaqondo obushushu egumbi kunokugcina iipropathi zomzimba zoqobo.Ngoko ke ubomi benkonzo bude.
Okwesine, uzinzo lweempawu zomzimba. Ubume bemarmore yendalo buqwalasele kwaye bufana. Kwimeko yempembelelo yangaphandle, ayizukubhuqa, ukuchaneka komphezulu akuyi kuchaphazeleka.Ngenxa yokuba izinto zizinzile ngokwasemzimbeni, inokuqinisekisa ukuba akukho deformation emva kwexesha elide kunye nokulwa nerusi, i-antimagnetic, insulation.
Okwesihlanu, akukho magnetization. Izinto zemarble zendalo nokuba zide kangakanani emva kokusetyenziswa zingabonakali njengemagnethi, zinokuhamba kakuhle kwaye zingachatshazelwa kukufuma.
Ngenxa yezi zinto ziluncedo, imiphezulu yeetafile zemabhile zisetyenziswa ngakumbi nangakumbi, kwaye uyilo lukwahluka kakhulu.Ukongeza kwiitafile zemabhile ezilula, zinokudityaniswa nezinye izinto, ukungqubana kubuhle obukhethekileyo.